Mabhodhoro anovavarira kurerutsa basa rekumhanyisa Windows app paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vashandisi veLinux vanofara nesoftware yatinayo, kutaura chokwadi ndanga ndichifunga nezvekuti ndiise chei bvunzo iyi, asi dzimwe nguva tinotarisa kubvunza paWindows. Nechikonzero ichocho pane WINE uye, zvichibva pairi, dzimwe nzira senge PlayOnLinux. Zvakafanana neyekupedzisira, panga paine imwe sarudzo inonzi Bottles, Mabhodhoro muchiSpanish, kunyange hazvo software zhinji isingashandurwe. Yayo uzivi yakafanana ne PlayOnLinux, asi mune dzidziso inoita kuti zvinhu zvive nyore.
Mabhodhoro pachawo, anowanikwawo seAppImage, anorema zvishoma. Iyo Flathub vhezheni inorema chete 2MB, asi neizvozvo isu tichave tichirodha pasi iyo interface, yekutambira skrini uye zvimwe zvishoma. Ukangotanga iwe, zvimwe zvinhu zvinozoiswa, senge izvo zvine hukama neWINE. Uye, kana uchiisa bhodhoro uye zvichienderana nesoftware, ungangoda zvimwe zvinhu, seGecko. Chero zvazvingaitika, izvo zvinongoitika mumabhodhoro ekutanga.
1 Mabhodhoro anonzwisisika, asi anotora mamwe kujaira
2 Zvimiro uye kuisirwa
Mabhodhoro anonzwisisika, asi anotora mamwe kujaira
Pane chinhu chimwe chete chandinogara ndichiteerera mune software: ita kuti ive intuitive. Kana zvirizvo, tinogona kuzviitira isu pachedu pasina rubatsiro, nekuti isu tichava intuit maitiro ekuzviita. Kana zvisina kudaro, isu tichafanirwa kutarisa dzidziso uye tinogona kuneta tisati tatanga. Mabhodhoro zvine hungwaru, zvichiita kuti zvive nyore kushandisa. Kana tagadzira mabhodhoro, kana paine chinhu chinoda kutorwa pasi, zvinodaro. Zvino, sezvatinoona mumufananidzo unotevera, mabhatani ese akajeka uye tichaziva zvekuita.
Zvatinazvo mupikicha yapfuura ibhodhoro reWinRar. Isu tine iyo Bhodhoro tebhu, panowanikwa mufananidzo wekare, izvo Zvido, Kutsamira uye Zvirongwa, zvinove izvo zvichave zviri muhombodo iyoyo. Vaviri vanobuda, asi vanoita zvimwe chete. Kana tikatarisa pane zvingasarudzwa, WinRar 6.0.0 uye Wine Gecko yakaiswa. Kana tangopa «Tamba», isu tinozovhura chirongwa.
Kuti tigadzire "bhodhoro", tinofanirwa kubaya pane bhatani rekuwedzera kumusoro kuruboshwe, sarudza mhando yesoftware yatinoda kuisa pakati pemutambo, kunyorera kana tsika, uye kuisirwa .exe. Maitiro acho ari nyore uye, sezvatatsanangura, Kana iwe uchida chimwe chinhu, chichavaisira icho isu. Nezve iyo yekupedzisira, kekutanga nguva yatinotanga iyo app kana kuisa software, zvese zvinotora nguva yakareba.
Kana iri dhizaini, shandisa a interface inotaridzika zvirinani muGNOME, iyo inoimba zvishoma pane mamwe madhesiki sePlasma.
Zvimiro uye kuisirwa
Gadzira mabhodhoro uchishandisa mamiriro akafanogadzirirwa kana gadzira yako wega.
Mhanya zvinoitwa (.exe /.msi) pamabhodhoro ako, zvakananga kubva kumenu yemenu maneja maneja menyu.
Zvoga kuonekwa kwezvishandiso zvakaiswa pamabhodhoro ako.
Wedzera zvakachinjika nharaunda nekukurumidza.
Tsiva maDLL mafaera zvakananga kubva pane zvinodiwa nebhodhoro.
Pane-iyo-nhunzi mumhanyi chinja chero bhodhoro.
Mhando dzakasiyana dzemitambo yekuita optimizations (esync, fsync, DXVK, cache, shader compiler, kurodha… nezvimwe zvakawanda).
Otomatiki kumisikidza uye manejimendi eWine uye Proton vatambi.
Otomatiki bhodhoro kugadzirisa kana kutyora.
Yakavakirwa-mukati yekuvimbika inosimudza inoenderana nenzvimbo yemutyairi repository.
Yakabatanidzwa basa maneja wemaitiro ewaini.
Kuwana ProtonDB uye WineHQ yekutsigirwa.
Sisitimu yekuunza yako gadziriso kune nyowani shanduro dzeMabhodhoro.
Mikana yekugadzira backup makopi uye kupinza mabhodhoro.
Kugona kupinza WINE prefixes kubva kune vamwe mamaneja.
Bhodhoro vhezheni yekudzora (kuyedza).
La GitHub peji chirongwa hachiratidze kuti Mabhodhoro akaiswa sei, asi mu kurodha peji hongu tinogona kurodha yako AppImage uye inotibatanidza neFlathub kuti tikwanise kuisa yako Flatpak package. Muchiitiko chekutanga, izvo zvatino dhawunirodha ichave iyo inoitisa faira iyo ichatorawo zvese zvinodiwa sezvatinoshandisa software. Muchiitiko chechipiri, tinogona kutsvaga Mabhodhoro mune yedu software centre, kana ikatsigira Flatpak uye isu takawedzera iyo Flathub repository, uye nekuiisa senge chero imwe package. Tinogona zvakare kurodha pasi yayo kodhi kodhi, kana imwe yesarudzo mbiri dzekare ikasashanda zvakanaka mukuparadzirwa kwedu kweLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mabhodhoro anovavarira kurerutsa basa rekumhanyisa Windows app paLinux
Morse kodhi software. Dzimwe sarudzo dzakavhurika sosi